Ny hazo fijaliana sy ny lalana
"Iza no hendry mba hahafantatra izany zavatra izany? Na manan-tsaina mba hahalala izany? Fa mahitsy ny lalan'i Jehovah, ary ny marina no mizotra eny aminy; fa ny mpanota kosa dia tafintohina eny aminy." - Hos. 14:10.
Manambara ny arnin'ny tombambidy izay omen' Andriamanitra ny olombelona sy ny halehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika ny hazo fijaliana amin'ireo mponin'ny lanitra sy ny tontolo tsy lavo ary ny tontolo lavo. Maneho eo imason' izao tontolo izao, sy ny anjely ary ny olombelona izany fa tsy azo ovana ny lalan'Andriamanitra. - RH, 23 May 1899.
Ny fahafatesan'i Kristy dia porofo mandresy lahatra sy mandrakizay fa tsy miova tahaka ny fiandrianany ihany ny lalan'Andriamanitra (...) Ny tsy niarovan'Andriamanitra ny Zanani-lahy, ho Antoka ho an'ny olombelona, dia porofo haharitra mandrakizay eo anatrehan'ny olo-marina sy ny mpanota, eo anatrehan'Andriainanitra, izay manamarina fa izy dia tsy hanala tsiny izay mandika ny lalany. Ny fandikana ny didin'Andriamanitra rehetra, na dia kely monja aza dia voarakitra ho tadidy, ary rehefa tonga ny fotoana hanatsoahana ny sabatry ny fahamarinana, dia hanao ny asany amin'ireo mpanota tsy nibebaka izany, dia izay nataony koa tamin'ilay Andriamanitra nijaly - SDABC 3:1166.
Noho ny fahamarinan'i Kristy isaina ho an'ny mpanota dia afaka mahatsapa ilay mpanota fa voavela heloka, ary ho fantany fa tsy manameloka azy intsony Izy satria mifanaraka amin'ny lalana sy ny fitakiany rehetra ny fiainany. Eo am-pamakiana sy fieritreretana ny amin'ny famaizana hitranga amin'ny tsy mino sy ny mpanota dia tombontsoany ny mahita fa ny tenany dia isaina ho tsy manan-tsiny. Amin'ny alalan'ny finoana no ihazonany ny fahamarinan'i Kristy („..) Koa satria fantany fa mpanota sy mpandika ny lalana masin'Andriamanitra ny tenany, dia ny fankatoavana tanteraka nasehon'i Kristy, ny nahafatesany teo Kalvary noho ny fahotan'izao tonlolo izao no jereny; ary dia azony antoka fa hamarinina amin'ny finoana izy ao amin'ny fahamendrehan'i Kristy sy ny sorona nataony. Tsapany fa noho ny aminy no nankatoavan'Ilay Zanak' Andriamanitra ny laIana , ka tsy hihatra amin'ny mpanota izay mino an'i Kristy ny sazin'ny fandikan-dalana. Ny fankatoavana mavitrika nasehon'i Kristy dia mampitafy fahamarinana ny mpanota ,fahamarinana izay mifanaraka amin'ny fitakian'ny Y1, 29 Novambra 1894.